အောင်လံမြို့နယ်ထွက် ပြောင်းဖူးများ ရန်ကုန်ဈေးကွက်၌ ဈေးကျနေသဖြင့် မင်းဘူးဈေးကွက်သို့တင်ပ?? - Yangon Media Group
အောင်လံ၊ ဩဂုတ် ၁၅-မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ် အတွင်း ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူ များမှာ ပြောင်းဖူးများကို ရန်ကုန် ဈေးကွက်သို့ အများဆုံးတင်ပို့နေ သော်လည်းယခုအခါပြောင်းဖူး ပေါ်ချိန်ဈေးကျနေသဖြင့် မင်းဘူး ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချနေ ကြရကြောင်း ပြောင်းစိုက်တောင် သူများထံမှ သိရသည်။
“”ဒီနှစ်ပြောင်းဈေးကွက်က ပြောင်းထွက်ချိန်မှာ ရန်ကုန်ဈေးကွက်က ဈေးကျတဲ့အတွက် မင်းဘူး ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ရောင်းချနေရပါတယ်။ ပြောင်းအထွက်ကတော့ အထွက်နှုန်းကျပေမယ့် ဈေးအနေအထားသင့်တဲ့အတွက် တစ်ဝက် လောက်တော့ အမြတ်ကျန်ပါတယ်”” ဟု အောင်လံမြို့နယ် ဆာမိကုန်း ကျေးရွာမှ တောင်သူကိုကျော်သိန်း အောင်ကပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ပြလို့ကျေးရွာ၊ မိုးကောင်းကျေးရွာ၊ ဆာမိကုန်းကျေးရွာ၊ အင်းကုန်း ကျေးရွာ၊ ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာ နှင့် စမ်းကလေးကျေးရွာများတွင် ဖူးစားပြောင်းများကို အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြပြီး ယခုအခါပြောင်းဖူး များထွက်ရှိချိန်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်ဈေး ကွက်သို့မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် တင်ပို့နေပြီဖြစ်ကာပြောင်းဈေးမှာ ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင် ကျဆင်း လာသဖြင့် မင်းဘူးဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နေရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါပြောင်းဖူးများကို မင်းဘူးဈေးကွက်တွင် အသန့်တစ်ဖူး ကျပ် ၁၁၀၊ အလတ်တစ်ဖူးကျပ် ၈၀ အထိဈေးရကာ ယခင်နှစ်များက ပြောင်းဖူးတစ်ဖူးလျှင် ကျပ် ၄၀ မှ ကျပ် ၂၀ အထိဈေးကျသ ဖြင့်တောင်သူများအရှုံးပေါ်ခဲ့ရ ပြီးယခုနှစ်တွင်ထက်ဝက်ခန့်အ မြတ်ရှိကြောင်း သိရသည်။အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ပြောင်းစိုက်တောင်သူများမှာ ထိုင် ဝမ်ပြောင်းမျိုးစေ့ကို အများဆုံးစိုက် ပျိုးကြခြင်းဖြစ်ကာပြောင်းမျိုးစေ့ တစ်ဘူးလျှင် ကျပ် ၁၆၀ဝ၀ ရှိပြီးတစ်ဧကတွင်ပြောင်းအဖြူမျိုးစေ့ ၁၀ ဘူးနှင့်ပြောင်းအဝါစိုက်ပါက တစ် ဧက ပြောင်းမျိုးစေ့ငါးဘူးစိုက်ရ ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ် အသိအမှတ်ပြု စတစ်ကာပါရှိသည့် ဆိုင်ကယ်များကိုသာ ကျောင်းအတွင်းဝင်ခွင့်ပြ??